သူမ တို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေမယ့် သတင်းအတုတွေ ထွက်ရှိနေတဲ့ အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – GaMone Media
သူမ တို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေမယ့် သတင်းအတုတွေ ထွက်ရှိနေတဲ့ အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်း ကတည်း ကနေ အခုချိန်ထိ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေများကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် သတင်းအချက်အလက် များအား သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေစဉ်အတောအတွင်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကောလ ဟာလများစွာ ထွက်ရှိနေတာကြောင့် မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းဆလာက်က သုသုရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် ပြန်လည် ဖြေရှင်းလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ page နဲ့websiteမှာ ပိုင်ဖြိုးသုကပြောကြားလာပါတယ် ဆိုပြီး တင်ထားတဲ့ သတင်းတွေ့လိုက်လို့ပါ…. သူရေးထားတာကလည်းတကယ်ကိုယုံလောက်စရာ အကွက်ကျကျဇာတ်လမ်းဆင်ရေးထားတာပါ… အခုဒီမှာအဲဒီ့interviewရဲ့linkကိုမထည့်ပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်မထည့်ပေးလိုက်မှအဲဒီ့ pageအခုထက် reachကောင်းသွားမှာစိုးလို့ပါ….(လက်ရှိတောင်သူ့postကshare5.7K) ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်‌စေမယ့်ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးထားတာပါ… အဲဒီ့postအောက်မှာ ဝိုင်းဝန်းစွပ်စွဲပြောဆိုထားသူများကိုလည်းမေးချင်လို့ပါရှင်…
ကျွန်မတို့လင်မယားကဒလန်တွေဆိုရင် ဝရမ်းထုတ်ခံရပါ့မလား??? ကျွန်မ တို့သာ အမှန်တရား ဘက်ကမရပ်တည်ချင်ရင် အသာလေးရေလိုက်ငါးလိုက် ရေသာခိုနေကြမှာပေါ့ရှင်…(အဲ့သလို နေနေကြသူတွေလည်းရှိနေတာပဲ) အများစိတ်ဆင်းရဲနေရချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခတွေမဝေမျှချင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခုတော့အတိအကျကျွန်မပြောပါရစေ… ကျွန်မပိုင်ဖြိုးသု သည် မည်သည့်အသွင်ပြောင်း mediaအတု pageအတုကိုမျှ interviewဖြေကြားထားခြင်းမရှိပါ… အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မှ ဝရမ်းပြေးဘဝအတွေ့ကြုံများဆိုပြီး တစ်ရက်သက်သက်ပြောပြရဦးမယ်….” ဆိုပြီးလက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလဟာလသတင်းအတုတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေရန်အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလအစပိုင္း ကတည္း ကေန အခုခ်ိန္ထိ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနရေပမယ့္လည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေဝမွ်ေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိမ္းေရွာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္း သူမတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေကာလ ဟာလမ်ားစြာ ထြက္ရွိေနတာေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းဆလာက္က သုသုရဲ႕ Facebook အေကာင့္တြင္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
” အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ page နဲ႔websiteမွာ ပိုင္ၿဖိဳးသုကေျပာၾကားလာပါတယ္ ဆိုၿပီး တင္ထားတဲ့ သတင္းေတြ႕လိုက္လို႔ပါ…. သူေရးထားတာကလည္းတကယ္ကိုယုံေလာက္စရာ အကြက္က်က်ဇာတ္လမ္းဆင္ေရးထားတာပါ… အခုဒီမွာအဲဒီ့interviewရဲ႕linkကိုမထည့္ေပးဘူးဆိုတာ ကြၽန္မထည့္ေပးလိုက္မွအဲဒီ့ pageအခုထက္ reachေကာင္းသြားမွာစိုးလို႔ပါ….(လက္ရွိေတာင္သူ႔postကshare5.7K) ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္‌ေစမယ့္ေခါင္းစဥ္တပ္ ေရးထားတာပါ… အဲဒီ့postေအာက္မွာ ဝိုင္းဝန္းစြပ္စြဲေျပာဆိုထားသူမ်ားကိုလည္းေမးခ်င္လို႔ပါရွင္…
ကြၽန္မတို႔လင္မယားကဒလန္ေတြဆိုရင္ ဝရမ္းထုတ္ခံရပါ့မလား??? ကြၽန္မ တို႔သာ အမွန္တရား ဘက္ကမရပ္တည္ခ်င္ရင္ အသာေလးေရလိုက္ငါးလိုက္ ေရသာခိုေနၾကမွာေပါ့ရွင္…(အဲ့သလို ေနေနၾကသူေတြလည္းရွိေနတာပဲ) အမ်ားစိတ္ဆင္းရဲေနရခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဒုကၡေတြမေဝမွ်ခ်င္ေပမယ့္ ဒီတစ္ခုေတာ့အတိအက်ကြၽန္မေျပာပါရေစ… ကြၽန္မပိုင္ၿဖိဳးသု သည္ မည္သည့္အသြင္ေျပာင္း mediaအတု pageအတုကိုမွ် interviewေျဖၾကားထားျခင္းမရွိပါ… အေရးေတာ္ပုံႀကီးေအာင္မွ ဝရမ္းေျပးဘဝအေတြ႕ႀကဳံမ်ားဆိုၿပီး တစ္ရက္သက္သက္ေျပာျပရဦးမယ္….” ဆိုၿပီးလက္ရွိျပန႔္ႏွံ႔ေနတဲ့ ေကာလဟာလသတင္းအတုေတြ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖရွင္းလာတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post သင် နေ တဲ့ အိမ် (သို့) အခန်းမှာ ဒီအချက် (၄) ချက် ရှိ နေရင် အမြန်ဆုံး ပြင်လိုက်ပါ
Next post ဒီစာဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကြည့်တက်သော တဘို့ တည်းသမား များဖြစ် ကြတဲ့ ဒလံ တွေ အတွက် အိတ်ဖွင့် ပေးစာလေး ပါ ဗျာ